Chris Evans ayaa ku dhowaadey burburkii masiibadii Captain America ee 'Avengers: Endgame' - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Chris Evans wuxuu ku dhowaadey burburkii Captain America ee 'Weeraryahannada: Endgame' - BGR
Chris Evans wuxuu ku dhowaadey burburkii America Captain America ee 'Weeraryahannada: Endgame' - BGR
Xiddigaha Rakaabka: Dhamaan Agaasimaha iyo madaxa la yaabin, Kevin Feige, oo dhan ku hadlay isbuucaan si uu ugala hadlo filimka soo socda ee ka yaabin, taas oo la xiri doono wajiga saddexaad ee la yaabin MCU ah, shir Jon Favreau. Shirka. Qof kastaa wuxuu noolyahay ka dib dhacdooyinka Dagaalkii Infinity wuxuu ahaa qayb ka mid ah guddiga, kuwa soo saarayaasha ayaa si macquul ah uga tegaya kuraas yar oo jilicsan oo ay ugu jireen filimkii hore Avengers .
dhaba aqoonsan Karen Gillan, Paul Rudd, Scarlett Johansson, Kevin Feige, Robert Downey Jr., Don Cheadle, Chris Hemsworth, Danai Gurira, Jeremy Renner, Anthony Russo, Chris Evans, Joe Russo, Brie Larson iyo Mark Ruffalo su'aalo jawaabay Favreau iyo taageerayaashiisa inta lagu jiro dhacdada. Laakiin waxaan diirada saari doontaa Evans, kuwaas oo ku dhawaad ​​dumay qaddar ee Captain America shir jaraa'id oo la aamusiin ugu yaraan laba jeer by saaxiibadii.
Evans waxay door-bideen doorka Captain America oo ah super supero, oo asal ahaan ka dhistay Steve Rogers oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha aan waxba galabsan ee Rakaabka. Si kastaba ha noqotee, waqtigiisa uu ciyaarayo geesiga Marvel ayaa ku soo dhamaanaya Endgame Xaqiiqda ah in jilibku uu ka soo horjeeday dhawr bilood ka hor isagoo joojinaya toogashada.
Hadda, Evans ma ahan Tom Holland iyo Mark Ruffalo markii uu hoos u dhacay Avengers isaga oo aan ka fakarin, laakiin wuxuu ku khasbanaaday inuu dib ugu laabto dalxiiska Twitter-ka isagoo sheegay in farriintiisa farriinta aysan micnaheedu ahayn in Captain America uu dhiman doono inta lagu jiro Endgame . Xataa kiiskan, waxaa loo maleynayaa in Steve uu yahay mid ka mid ah dhibbanayaasha ugu suurogal badan Endgame waxaanan aragnaa sifooyinka la soo jeediyay ee soo jeedinaya in tani ay noqon doonto kiiska.
Waxay ku jirtaa ruuxan inaan soo laabano. shirkii jaraa'id, halkaas oo Evans ay ku dhex fadhidey walaalaha Russo, oo ah bartamaha booska ugu macquulsan. Mid ka mid xitaa wuxuu oran karaa in qofkii abaabulay kuraasta isku dayay inuu xooga saaro kaalinta Evans Endgame .
"Captain America waa halyeey caadi ah. oo leh xeerka anshaxa ee aan la qoondeeyn karin, oo aad ka soo kabatay wakiilkiina, isaga oo inoo muujinaya xitaa wax badan oo ka dhigaya jilbaha, "ayuu bilaabay su'aashiisa. "Maxay macnaheedu tahay inaad u ciyaari karto, maxaad ugu jeceshahay Captain America ee filimkan?"
"Waa hagaag, waxaan u maleynayaa in aan siin karo istaraatiijiyad ballaaran," ayuu yiri jilaa ka dib markii isbeddel farxad leh, isku dayey in uu caddeeyo inuusan ka hadli karin faahfaahinta. "Waxaan u maleynayaa dhamaadka dabka, okay - waxaan ula jeedaa inay badbaado leedahay in la dhaho, sax? - filimkani waxa uu ku dhammaaday waxyaabo badan oo ... "iyo markaa marka Joe Rossso uu googoynay cod leh, isaga oo ugu yeeray garsoorayaasha in ay soo farageliyaan.
"Waxaa jira muusig ka mid ah filimada 22 ..." Evans wuxuu isku dayay in uu sii wado ficilkiisa taxane ah inta qofkasta uu ku qoslayo, ka hor inta uusan dhahayin inuu baxayo. "Waxa uu ku dhacay xanuun badan," Evans mar kale wuxuu isku dayay inuu ka hadlo ku saabsan Qadarka Cape, laakiin wuxuu ka tagay Captain America oo gebi ahaanba ka jawaabayay jawaabtiisa, isaga oo ku andacoonaya in mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku saabsan kaalintan ay ahayd sanadihii 10 ee saaxiibtinimada iyo cilaaqaadka, iyo qoyska MCU oo dhan oo uu qayb ka yahay.
Maxaa Evans ayaa sheegi lahaa haddii uu keligaa ahaa? Waxaa laga yaabaa inaanan marnaba ogaanin, maaddaama Joe Russo ay gooyeen, laakiin waxa laga yaabaa in ay hoos u dhigtay waxyeelo weyn Endgame .
Later, marka qof uu doonayay in uu ogaado cidda ka jeeclaadeen gadhka in gadhka halkii xiiray badan furka, Evans ayaa ku jawaabay inuu ka doorbido goofo gadh ka hor inta qof dadweynaha Ma xasuusan karo in uusan kala hadli doono timaha timaha shir jaraa'id. ka dibna waxay u codeeyeen in hat ah la laalo waa kan ugu fiican, xitaa haddii Rudd labadoodaba jeclaaday. Downey Jr. ayaa marin habaabiyay doodda adigoo ka dhigeysa inuu ku saabsan Goobta Shawarma ee Rakaabka isaga oo soo kiciyay Chris Evans, isagoo ruxaya farsamo qarsoodi ah oo qarsoodi ah.
Haddii aad aragtay taxanaha dadweynaha ee filimka Endgame waxaad ogtahay in jilayaal badan ay leeyihiin timo kala duwan, taas oo u muuqata inay soo jeedinayso marxaladda wakhtiga u dhexeeya dhacdooyinka, iyo sidoo kale safarka waqtiga. Dhulka Cape Town, waxaannu ka helnaa dhar isku mid ah oo ku yaala kakoobyadan, iyo sidoo kale iyada oo aan gadhkiisi lahayn.
Agaasimayaasha 'Avengers' ayaa soo bandhigaya labadii filimood ee lagu daawanayey "Endgame" - BGR